Eyona Block-ADS NO ROOT, iibhloko zentengiso yewebhu, iiapps kunye nemidlalo | I-Androidsis
[APK] Eyona Block-ADS NO ROOT, web ad blocker, izicelo kunye nemidlalo
UFrancisco Ruiz | | Ingcambu Android, Ukusetyenziswa kwe-Android, Ukukopela kwe-Android, Tutorials
Sibuya neposi entsha yevidiyo apho ngeli xesha ndikuzisela ngokuthe ngqo ukukhuphela kwi-apk yento endiyiyo eyona block-ADS ye-Android ngaphandle kwesiphelo esineengcambu.
Isicelo endisifumeneyo, phantse rhoqo kwiforum yabaphuhlisi beXDA, kwaye ngoku ndiza kukunika kwaye ndikucebise kwisithuba esilandelayo. Iposti yevidiyo apho ndikubonisa khona ukumiselwa kwayo kunye nokusebenza kwayo kunye nokusebenza kwayo vimba ukuthengisa kokubini kumaphepha ewebhu nakwizicelo nakwimidlalo esiyifakileyo kwizixhobo zethu ze-Android.
1 Khuphela i-Blokada ye-Android, eyona ibhloko ye-block-ADS ayinangcambu
2 Uyifaka njani iBlokada ye-Android kwaye uphephe intengiso ecaphukisayo
3 Kodwa wenza ntoni uBlokada?
Khuphela i-Blokada ye-Android, eyona ibhloko ye-block-ADS ayinangcambu
Ukuqala ndikuxelele ukuba esi sicelo siphendula kwigama le IBlokada, ngumthombo ovulekileyo okanye isicelo esivulelekileyo, ngelishwa lethu asizokwazi ukukhuphela ngokuthe ngqo kwiVenkile kaGoogle yokudlala, kwaye ngelishwa kutheni le nto insiza esebenza kakuhle kwaye ihambisa oko ikuthembisayo.
Ukuyikhuphela, nje yiya kwiwebhusayithi yakho kwaye ukhethe uhlobo olulungele iimfuno zethu ngokwenguqulo ye-Android esiyifakileyo kwisixhobo sethu. A) Ewe sine-apk yeenguqulelo ze-Android 5.0 okanye ngaphezulu que sinokuzikhuphelela kule khonkco inye, kunye nolunye uguqulelo lweetheminali ze-Android ezinenguqulo yenkqubo yokusebenza kaGoogle efakiweyo ukuya kuthi ga kwi-Android 4.4 onokuyenza khuphela ngokuthe ngqo kwikhonkco.
Uyifaka njani iBlokada ye-Android kwaye uphephe intengiso ecaphukisayo
ukuba faka i-Blokada ye-Android kwaye ulahle yonke intengiso egqithisileyo nengacaphukisiyo edla ngokubonakala kuthi xa ukhangela amaphepha ewebhu, okanye nentengiso engathandekiyo uninzi lwezicelo kunye nemidlalo esiyifakileyo kwii-Androids zethu, kuyakwanela ukukhuphela i-apk ngokwenguqulo ye-Android esiyifakileyo Isiphelo sendlela, ukongeza yenza imithombo engaziwayo okanye ukhetho olungaziwayo Ukusuka kuseto lwe-Android yethu kwicandelo lokhuseleko.
Ke kuya kwanela ukunqakraza kwisaziso sokukhutshelwa okugqityiweyo ngempumelelo kwisakhelo sesaziso se-Android yethu, okanye ukuba sele siyisusile, hamba kunye nayiphi na ifayile ekhangela indlela umxokozelo y Cofa kwifayile ye-apk eyayikhutshelwe ngaphambili.
Kodwa wenza ntoni uBlokada?
IBlokada yenza ibhulorho edlula kwiVPN apho iya kuthi icocwe lonke uthutho lwenethiwekhi oluveliswe kwisiphelo sethu se-AndroidUkusuka apho, ucofe yonke intengiso engafunekiyo kwaye ihlala ingena ngaphakathi edla ngokungena ngesikhangeli sewebhu okanye ngokusetyenziswa kunye nemidlalo esiyifakileyo kwiitheminali zethu.
IBlokada ngokufanelekileyo ibhloka iintengiso, ukulandelela kunye ne-malware, igcina isicwangciso sedatha kwaye yenza isixhobo sethu sikhawuleze ngelixa sikhusela imfihlo yethu. Isimahla, imithombo evulekileyo kunye nesicelo esikhuselekileyo.
IBlokada kulula ukuyisebenzisa, ngokunqakraza kwiqhosha ukuqala isicelo uya kuqala ukwenza umsebenzi wakho ngendlela esebenzayo nesebenzayo ngaphandle kwesidingo sesiphelo esineengcambu okanye ungene kulungelelwaniso olunzima. Kwividiyo endikushiye kuyo ekuqaleni kwesi sithuba ndikubonisa ukuba isicelo siqhuba kakuhle kanjani kunye noseto olusisiseko lomsebenzisi ongeyongcali kwezi zicelo.
Ukongeza ekuthinteleni intengiso okanye ukuvimba iintengiso ezicaphukisayo, ukusuka kwiBlokada ye-Android siya kuba nakho ukufikelela kwifayile ye- Iinkcukacha-manani zentengiso ezifunyenwe sisicelo Kunye neenkcukacha-manani zolondolozo olulandelayo lwee-megabyte ezicoca lonke eli nani lokuxhaphaza loluntu olungena kuthi amaxesha amaninzi ngaphandle kokulwazi ngomnyango ongasemva weendlela zethu ze-Android.
Konke oku kwaye ngenxa yokuba usetyenziso lusebenza ngokugqibeleleyo kuzo zombini iinethiwekhi zeselfowuni naxa sixhunyiwe kwinethiwekhi ye-Wi-Fi, kum IBlokada yeyona ilungileyo ibhloko-ye-ADS ngaphandle kwengcambu ye-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » [APK] Eyona Block-ADS NO ROOT, web ad blocker, izicelo kunye nemidlalo
Isicelo esihle sokuthintela iintengiso ezicaphukisayo, kubonakala ngathi kulula kwizibonelelo kuneAdguard.
Molo, busuku obuhle uFrancisco, isicelo esinomdla, ndiza kuyivavanya kwi-s7 yam. Ndingakubuza ukuba kukho isicelo sokuvula iselfowuni ngomnwe kuphela, ngaphandle kokucela iphasiwedi okanye ukusebenzisa naliphi na elinye iqhosha, enkosi.
Ithelekiswa njani ne "AdClear" endiyifakileyo kwi Motorola yam kwaye isebenza ngokugqibeleleyo? Ndinomdla wokwenza uthelekiso.
kodwa uphambene sitsho
awudingi kusixelela ngobomi bakho
Phendula kodwa uphambene
Kuthekani ukuba isicelo sihlala sishiyiwe
I-beta yokuqala ye-Android Oreo ye-S8 kunye ne-S8 + ngoku iyafumaneka kwamanye amazwe
Ifowuni yeRazer, yile fowuni yabadlali